बि.पी. प्रतिष्ठानको एमआरआइ घोटाला प्रकरण – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
बि.पी. प्रतिष्ठानको एमआरआइ घोटाला प्रकरण
टेण्डर रद्द गर्ने निर्णयमा रजिष्ट्रार र रेक्टरले जनाए ‘असहमति’
२०७४, २२ चैत्र बिहीबार १९:०२
धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमआरआइ खरिद प्रकरण स्थगित गर्ने निर्णयमा प्रतिष्ठानका दुई जिम्मेवार कार्यकारीणी समितिका सदस्यहरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएका छन् ।
दुई दिनअघि प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. राजकुमार रौनियारले एमआरआइ उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया रद्द गर्ने एकलौटी निर्णय गरेका थिए । डा. रौनियारको एकल निर्णयलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारीणीबाट पास गराउन हिजो बसेको बैठकमा ७ जना कार्यकारीणी मध्येका रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षले ‘आपत्ति’ जनाएको बुझिएको छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारीणी समितिका एक सदस्यले मंगलबार उपकूलपति डा. रौनियारको एकल निर्णयले प्रतिष्ठानको साख गिर्दै गएको र भ्रष्टाचार समेत मौलाउँदै गएको बताए ।
उनले एलसी खोलिसकेको अवस्थामा टेण्डर स्थगित गर्न नमिल्ने भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित भएको जिकिर गरे । ‘यहाँ जे जति कामहरु भईरहेका छन्, ती ब्यक्तिगत स्वार्थपुर्तिका लागि गरिएका छन्, अबपनि चुप लागेर बस्ने हो भने, प्रतिष्ठानको अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानको कार्यकारीणी समितिमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेको विषयमा धारणा राख्न ४८ घण्टाको समय हुन्छ । त्यो समय अवधिमा जुनै सदस्यले पनि आ–आफ्ना धारणा राख्न सक्नेछन् ।
एक सदस्यले आफुलाई जानकारी नभएको र संलग्न नै नभएको विषय प्रस्तुत गरिएकोले आपत्ति जनाएको स्विकार गर्दै ‘मेरो विषय भन्दा बाहिरको कुरा र, मेरो संलग्नता नै नभएको विषयलाई मैले
कसरी अनुमोदन गर्नु ?’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले एमआरआइ टेण्डर स्थगित भएको कुरा अनुमोदनका लागि कार्यकारीणीमा प्रस्तुत गरिएपनि माइन्युट हुन बाँकी रहेको बताए । ‘अनुमोदनका लागि प्रस्तुत भएपनि माइन्युट भएको छैन, भोली कसले के लेखे माईन्युट भएर आएपछि थाहा हुन्छ ।’ उनले भने ।
कार्यकारीणी समितिमा आफुलाई जानकारी नभएको विषय आएकोले आफुलाई थाहा नभएको विषयमा हस्ताक्षर नगर्ने एक सदस्यले बताए । ‘म संलग्न नभएको कुरा र विषयमा मैले कसरी सहमति जनाउने ? विषय अनुमोदन भएपनि माईन्युट भएको छैन, भोली रजिष्ट्रार र उपकुलपति ज्यूले हस्ताक्षर गरेर पठाएपछि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने कुरा हुन्छ ।’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानका उपकूलपतिले हस्पिटेक इन्टरप्राईजेजसँगको सेटिङमा लागतभन्दा डेढगुणा बढि रेटमा एमआरआइ १.५ टेस्ला खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रतिष्ठानका पूर्व उपकूलपति डा. वीपी दासको पालामा अहिलेकै सप्लायर्सबाट १२ करोडमा उक्त उपकरण खरिद गर्न लाग्दा तत्कालिन समयमा प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभाग प्रमुख रहेका डा. रौनियारले नै गुणस्तरहीन रहेको भन्दै खरिद गरे मान्य नहुने लिखित प्रतिवेदन दिएका थिए ।
तर, अहिले आफु उपकूलपति भएपछि कमिसनको लोभमा उक्त एमआरआइ लागत भन्दा डेढ गुणा महंगोमा खरिद गर्न टेण्डर गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एमआरआइ खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले टेण्डरको सम्पूर्ण फायलहरु अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दै आएको थियो ।
अहिले आयोगले छुट्टै टोली बनाएरै एमआरआइ उपकरण खरिद काण्डका फायलहरु धमाधम अनुसन्धान गर्दैछ । पछिल्लो समय एक साता अघि सोहि काण्डमा संलग्न प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई अख्तियारले बयानका लागि राजधानी बोलाएको थियो ।
एमआरआइ काण्डमा उपकूलपतिले सनराईज बैंक धरानलाई प्रभावमा पारेर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन सार्वजनिक विदामा (शनिबार) एलसी खुलाएका थिए ।
गत साउनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले प्रतिष्ठानमा छापामारी एमआरआई टेण्डरका महत्वपूर्ण फायलहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठानका डेपुटी रजिष्ट्रार अमित श्रीवास्तबले आयोगलाई लिखित जवाफ पठाएका थिए ।
स्मरण रहोस एमआरआइ उपकरण खरिद प्रक्रिया प्रति तत्कालिन शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. बिक्रम प्रसाद श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार तुल बहादुर श्रेष्ठले अनियमितताको आशंकामा त्यति बेलै फरक मत राखेका थिए ।
डा. रौनियारले प्रतिष्ठानको कार्यकारीणी समितिका सदस्य डा. प्रभात रंजन पोखरेल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मान्यता नपाइकनै विभागीय प्रमुख बनेर प्रतिष्ठानमा रजाई गरेका नन मेडिकल प्राध्यापक डा. माधब लम्साललाई आर्थिक प्रलोभन दिएर बहुमतको आधारमा टेण्डर खोल्ने र रद्द गर्ने दुवै निर्णय गरेका हुन् ।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग श्रोत भने कुनै पनि निर्णयले छानविन नरोकीने बताउँछ । आयोगका एक आयुक्तले एमआरआई, अंकोलोजी र क्यान्सर सेन्टरको काण्डको अनुसन्धान कुनैपनि भनसुन र सिफारिसले नरोकिने बताए ।
ओलीले भाउ दिएनन्ः अख्तियारमा सेटिङ्ग मिलेन
वाम गठबन्धनको सरकार बने पछि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचार प्रतिको शुन्य सहनशीलताको नितीको असर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयमा पनि परेको छ ।
अख्तियारका उपसचिव तहका सेटिङ्ग माष्टरहरु व्यापारीहरुसँग लुकेर मात्र भेट्न थालेका छन् । अख्तियार प्रमुख नबिन घिमिरे आफ्नो छवि बनाउन भिडेका छन् । यसको मारमा उपकुलपति रौनियार परेका छन् ।
यता यति एयरलाइन्सका मालिक आङ्ग क्षिरिंग लामालाई अनुनय बिनय गरेर प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका डा. रौनियारलाई ३ घण्टा पर्खाएर ओलीले नमस्कार मात्रै फर्काउँदै फिर्ता पठाएका छन् ।